माल्दिभ्सले नाशीदलाई किन दियो छुट्टी? - BBC News नेपाली
माल्दिभ्सले नाशीदलाई किन दियो छुट्टी?
ओलीभिया ल्यांग, बीबीसी न्यूज
उनी जेलबाट निस्केर राष्ट्रपति बने, र फेरी जेल फिर्ता गए। अहिले माल्दिभ्सका भूतपूर्व नेता मोहमद नाशीद उपचारका लागि ३० दिनको रिहाईमा ब्रिटेनमा छन्। तर के उनी घर फर्केलान्?
मैले मोहमद नाशीदलाई ८ वर्ष अघि भेट्दा नै उनको कथा असाधारण थियो। माल्दिभ्सको शक्तिशाली तानाशाहीमा उनी पातलो कपाल भएको एकजना अधिकारकर्मीबाट त्यतिबेलाका राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयुमका सबैभन्दा प्रभावशाली प्रतिद्वन्दी बने, र उनका भावी उत्तराधिकारी।
त्यसै वर्ष एकै जना व्यक्तिको तीन दशक लामो राजको अन्त्य गर्दै माल्दिभ्समा प्रजातान्त्रिक चुनावबाट छानिएका प्रथम राष्ट्रपतिका रुपमा उनले शपथ ग्रहण गर्दै गरेको मैले देखें। भविष्यका घटनाले कसरी माल्दिभ्सलाई खबरको शीर्षकमा बारम्बार ल्याईरहनेछन् र नाशीद ती हरेक घटनाको केन्द्रमा हुनेछन् भन्ने कुरा मैले त्यसबेला अनुमान गरेको थिईन।
त्यसपछिका वर्षमा उनले समुद्रको पानीमुनि क्याबिनेट बैठक गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाए, एकजना न्यायाधीशको गिरफ्तारीपछि विपक्षीको विरोधको कारण बने, उनले “कु” भनेको एउटा घटनामा उनी सत्ताबाट हटाईए, आतंकवादको आरोपको सामना गरे र बन्दी बनाईए। र अमाल क्लुनी नाम गरेकी एकजना मानवअधिकारवादी अधिवक्ताको समर्थन पाए।
उनी आफू केहि हप्ता अघिसम्म थुनामा रहेको एउटा टापुस्थित जेलभित्र एकल नजरबन्दमा फर्कन नपरोस् भनेर अहिले आफ्ना शक्तिशाली साथीहरुको सहयोग जुटाउंदै छन्।
यसको शुरुवात उनले शनिबार ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनलाई भेटेर गरे। एउटा प्रसिद्ध उक्तिमा क्यामरनले उनलाई सन् २०११ मा मेरा नयां सर्वोत्तम साथी भनेका थिए।
सोमबार उनी आफ्ना वकीलहरुलाई दायांबायां राखेर ब्रिटेनका पत्रकारहरुको सामु आएका थिए। उनको उमेर अलिकति बढेको थियो, र शायद उनी अलि थकित देखिन्थे। तर उनी उस्तै रमाइलो स्वभावका थिए, भीडलाई एक दुईवटा चुट्किला सुनाईरहने।
माल्दिभ्सको सरकारले एउटा वक्तव्यमा उनको छुट्टी “स्वास्थ्य उपचारका लागि नभई प्रचारबाजीका लागि” भएको भन्दै उनका प्रचारका क्रियाकलापलाई भत्सर्ना गरेको छ।
आफ्नो सबैभन्दा विख्यात कैदीलाई माल्दिभ्सले किन बाहिर जान र आफ्नो कथा विदेशी सरकार र संचार माध्यमलाई सुनाउन दियो?
गत वर्षको मार्च महिनामा नाशीदलाई दोषी ठहर्याईएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भत्सर्ना गर्यो तर राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन डेग चलेनन्।
तर दबाव भने बढिरहेको थियो।
प्रजातान्त्रिक उपलब्धीहरुको क्षति भए जस्तो देखिनु, उग्रवाद मौलाउनु, र चीनतर्फ झुकाव बढ्नुका कारण पश्चिमा मुलुकहरुले हिन्द महासागरको राजनीतिक स्थितिको उपेक्षा गर्न सम्भव भएन।
गत अक्टोबरमा नाशीदको गिरफ्तारी एउटा निरंकुश कदम भएको र उनलाई रिहा गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा निर्णयपछि यो स्थिति धेरैका लागि स्पष्ट भयो।
आफु वा आफ्ना निकटका समर्थकहरु पश्चिमा मुलुकमा निश्चिन्त भ्रमण गर्न नपाउने अथवा विदेशमा रहेका आफ्ना सम्पत्ति जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएपछि राष्ट्रपति यमीनको कट्टरता डगमगाउन थालेको हुनसक्छ। श्रीलंका, भारत र ब्रिटेनका मन्त्रीहरुका भ्रमण पनि भए र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट केही कडा शब्द आए। नाशीदका वकील जारेड जेन्सरका अनुसार नाशीद माल्दिभ्सबाट बाहिर नपुग्दै उनले अमेरिकाका विदेशमन्त्री जोन केरीसंग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, नाशीदलाई रिहा गर्ने निर्णय मानवअधिकारको आधारमा गरिएकोमा शंका छ। राष्ट्रपति यमीनले बिहीबार एउटा जुलुसलाई नाशीदलाई रिहा गर्ने निर्णय मानवअधिकारको आधारमा गरिएको भनेका थिए।
नाशीदलाई ३० दिनको छुट्टी दिईएको छ तर फर्कने प्रश्नबाट उनी तर्कन्छन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो विषयमा हँसी मजाक गरे।
“के म फिर्ता जान्छु, भनेर तपाईंहरु सबै सोध्न चाहनुहुन्छ,” उनले भने। “तर यो प्रश्नको द क्ल्याश (ब्रिटेनको एउटा सांगीतिक समूह) ले राम्रो उत्तर दिईसकेको छ। म जाउँ कि नजाउँ?”
पछि उनले बीबीसीलाई भने, “मेरो लागि र मेरो देशको लागि के राम्रो हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। के म माल्दिभ्सको एउटा जेलमा सडेर बसें भने त्यसबाट केही उपलब्धि हुन्छ? कि माल्दिभ्समा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको वकालत गर्नेहरुका लागि म बाहिर भएको ठिक छ?”
१२ वर्ष जेलमा बस्नका लागि मात्रै उनी किन माल्दिभ्स जाउन् भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ।
नाशीद छ महिनासम्म ब्रिटेनमा पर्यटकका रुपमा बस्न सक्छन् र त्यो अवधि लम्ब्याउन पनि सक्छन्। उनी त्यहाँ राजनीतिक शरणार्थी बन्न निवेदन पनि दिन सक्छन्।
उनले सन २००५ मा माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी स्थापना गरेपछि पनि त्यहि गरेका थिए। त्यतिबेला पाएको शरण (जुन उनले पछि त्यागे) ले उनलाई उनका प्रतिद्वन्दी गयुमसंगको लडाईंमा मद्दत गर्यो।
ब्रिटेनसंगको उनको सम्बन्धले गयुमका सौतेनी भाई यमीनका विरुद्ध पनि उनलाई सहयोग गर्ने उनले आशा राख्न सक्दछन्।
माल्दिभ्सको सरकारले पनि उनी फिर्ता आउने अपेक्षा नगरेको देखिन्छ।
बीबीसीसंगको एक अन्तर्वार्तामा विदेश मन्त्री दुन्या मौमूनले यो प्रश्नको सीधा जवाफ दिन नसकेको जस्तो देखिएको थियो।
दीर्घकालमा भने नाशीदले घर फर्केर आफ्नो राजनीतिक संघर्षलाई निरन्तरता नदिएको म सोच्न सक्दिन।
विरोध गरेका कारण उनी कैयौं पटक जेल परे, तर कहिले हार खाएनन्।
उनी र उनका अधिवक्ताले यो मुद्दा उनका बारेमा नभएर माल्दिभ्समा मानवअधिकारको स्थितिका बारेमा भएको र यी मुद्दालाई सम्बोधन नगरिएसम्म माल्दिभ्समाथि प्रतिबन्धहरु लगाईनु पर्ने बताएका छन्।
नाशीद रिहा भएर चुनावमा भाग लिन पाउने भए भने पनि उनका समस्याहरुको भने अन्त्य हुने छैन। माल्दिभ्सका समस्याहरु लामो समयसम्म रहेको तानाशाही र भ्रष्टाचारका उपज हुन् र तिनलाई सुल्झाउन गार्हो छ। न्यायपालिका भ्रष्ट र अयोग्य भएको देशमा कानुनी शासन लागु गराउन असम्भव प्रायः छ।
यस्तो वातावरणमा प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष हुनु स्वाभाविक हो। तर भविष्यमा नाशीदले यही वातावारणको भाग बन्न चाहेको बताएका छन्।